Amniga Degmada Cadaado oo Aad loo adkeeyay iyo ololaha Musharaxiinta oo wali socda – Radio Daljir
Amniga Degmada Cadaado oo Aad loo adkeeyay iyo ololaha Musharaxiinta oo wali socda
Abriil 29, 2015 3:13 b 0
Arbaco, Abriil 29, 2015 (Daljir) — Amniga magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud oo uu ka socdo shirka lagu dhisayo maamulka Gobollada Dhexe ee Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyay maanta, iyadoo ciidammo badan la dhigay jidadka iyo xaafadaha degmadaas.
Dadweynaha ku nool degmada Cadaado ayaa sheegay in xaalado amni oo aanay horay ugu arkin ay kusoo kordheen degmada, isla markaana ciidamo fara badan lagu arkayo gudaha magaalada iyo waddooyinka.
Sidoo kale, murashaxiinta ayaa iyana amaankooda la adkeeyay, waxaana la dhigay goobaha ay daggan yihiin oo ka baxsan degmada Cadaado, iyadoo lagu arkayo ciidammo fara badan oo aad u feejigan.
Murashaxiinta qaarkood ayaa la sheegay inay wataan ciidan u gaar ah oo amnigooda suga, iyadoo maamulka Ximan iyo Xeeb ay murashaxiinta ka dalbadeen in ciidankooda aysan soo dhaafin goobaha ay daggan yihiin.
Ciidamada Somalia iyo kuwa dalka Itoobiya ee AMISOM ayaa iyagana qayb ka ah sugidda amniga degmada Cadaado, iyagoo baaritaanno ku haya gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxaya.
Sidoo kale, waxaa iyagana hakad la geliyay dhaqdhaqaaqyada guud ee magaalada Cadaado, iyadoo waddooyinka iyo gaadiidka lagu xardhay sawirrada murashaxiinta ku loolami doona xilka madaxweynenimo ee maamulka loo dhisayo gobollada Mudug iyo Galguduud.
Ugu dambeyn, wararka laga helayo Cadaado ayaa sheegaya in dhawaan uu ay dhici doonto doorashada madaxnimo ee maamulka Gobollada Dhexe oo ay soo dooran doonaan 350-ergay oo ay xulustoodu ka socoto Cadaado.
Booliska Serbia oo Dad Soomaali ah xabsiga dhigay
Guddoomiyaha cusub ee Barlamaanka Jubbaland oo ka hadlay doorashadiisa